Teendhada Jilicsan ee Jilicsan, Taambuugga Gawaarida Gawaarida, Teendhada Gawaarida - Arcadia
Waxaan haynaa koox farsamo oo xirfad leh
Kormeer adag oo lagu xakameynayo tayada si loo hubiyo 100% u qalma
Bixiyaan adeegyo xirfadle ah, waqti ku habboon oo waxtar leh.
Taambuugga dusha sare ee Arcadia oo jilicsan ayaa laga sameeyay cabbirro kala duwan: 1.2 * 2.4M, 1.4 * 2.4M, 1.6 * 2.4M, 1.8 * 2.4M, sidoo kale waxyaabaha ugu badan ee muddada-joogga ah ee biya-joojinta ah ee 280G polycotton, 600D diamond Oxford, 420D Oxford . Cabirka iyo maadada labaduba waa ikhtiyaari. Iyaga waa la dejiyaa oo waa sahlan yihiin in lagu rakibo baararka saqafka. Qolka lifaaqa hoostiisa waa ikhtiyaari.
Sariirta sariirta: Miisaanka khafiifka ah ee Aluminiumka xajmiga 1mm
Ulaha: Ulaha Aluminium Dia 16mm
Furaash: 6cm xumbo cufnaan sare leh dabool la saari karo
Midabka safarka: 450G PVC oo leh velcro iyo jiinyeer
Daaqadda saqafka, bacda kabaha ayaa ikhtiyaari ah
Teendhada Sare ee Shell Hard
Taambuugga sare ee Arcadia Hard shell adag waa mid waara, oo tayo sare leh oo loogu talagalay trailer-kaaga ama kaamkaaga .Hardooyinka Sare ee Shell Rooftop-ka waxay sii soconayaan waqti dheer. Wayna u adkeysanayaan wax kasta oo waddadu kugu soo dhacdo. Kaliya maahan inay gabi ahaanba biyuhu diidaan, laakiin waxay ka badbaadi karaan barafka isla markaana si fiican u maareeyaan dabaylaha Teendhooyinka Sare ee Shell-saqafka Sare sidoo kale waxay u muuqdaan kuwa ugu fudud ee la dejin karo, waxaad si toos ah ugu dhejineysaa saqafyada saqafka, iyo markaad diyaar u tahay inaad gudaha gasho, si fudud u qaad mid ka mid ah dhinacyada waana sahlan tahay oo fudud, waxay qaadataa caadi ahaan wax ka yar daqiiqad
Cabir: 203 * 138 * 100CM
Dhar: poly0otton 280G
Sallaan aluminium telescopic
Laba nooc waa ikhtiyaari
Arcadia swag waxay kufiican tahay kaamaynta, dalxiis, tamashleynta ama dhamaadka usbuuca, kuwaas oo ah deg deg, fudud, waara, cimilada u adkeysta, 1 ama 2 qof oo raaxo leh, hal, boqorka ama cabir labo jibbaaran. Qaado dammaanaddeena tayada .Waxa kale oo ku jira cidhifka sagxadda biiyaha ee biyuhu ka hortagaan oo dhaayaha ka soo daataan. Naqshadeynta la hagaajiyay ayaa hadda waxay isticmaaleysaa tiirar aluminium tayo leh oo keena xoog iyo xasillooni dheeraad ah
Dharka: 400G polycotton, ripstop, biyuhu
Ulaha: 7.9MM Aluminium
Jiinyeer: sumadda SBS
Dabaqa: 450G pvc
Joodariga xumbo: 6cm dhumuc leh dabool la saari karo
Shiraac Gawaarida Gawaarida
Arcadia waxay soosaaraa surashooyin biyuhu kahortagi karaan oo noocyo kala duwan ah, si ay ugu haboonaato gaari kasta oo leh saqafka saqafka. Iyada oo leh qaybo ikhtiyaari ah: darbiyada dhinacyada, qolka mesh, dhulka ciidda iyo wixii la mid ah.
Cabbirka: sida macaamiisha looga baahan yahay
Dhar: poly0otton 280G ama 420D shaqo culus oo culus Oxford
Ulaha: Alumnium oo leh clip caag ah
Daboolka boorka: 600G PVC
Sale Hot 2 Qof 4WD Saqafka Vehicle Top Teendhada Car ...
4WD Maro adag Hard Shell Car Saqafka Top Teendhada Waayo, ...
Saqafka cusub design saddex gees qolof adag 2 qof al ...